Ala Digital Digital Landscape | Martech Zone
Ala Digital Marketing Landscape
Tuesday, January 8, 2019 Mọnde, Jenụwarị 7, 2019 Douglas Karr
2019 na-abịaru nso na ngbanwe oge niile na mpaghara mgbasa ozi na-aga n'ihu ịgbanwe ụzọ anyị si eme mgbasa ozi dijitalụ. Anyị elelela ụfọdụ ụdị dijitalụ ọhụrụ, mana dịka stats ahụ, ihe na-erughị 20% nke azụmaahịa emejuputara usoro ọhụụ na atụmatụ mgbasa ozi dijitalụ ha na 2018. Nke a faсt na-akpata esemokwu: anyị na-elele usoro ọhụrụ ndị na-atụ anya ịme ebili mmiri na na-abịanụ afọ, ma na-emekarị, arapara ochie ụzọ.
2019 nwere ike ịbụ afọ iji weta àgwà mgbasa ozi dijitalụ ọhụrụ. Ihe rụrụ ọrụ na dijitalụ afọ gara aga nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ afọ a. Maka ndị chọrọ inweta nkọwapụta zuru oke, ndị otu Epom Market bara nnukwu uru n'ime mgbanwe mgbasa ozi dijitalụ ma nweta nkọwa zuru ezu banyere usoro anyị ga-agba akaebe na 2019.
Igodo ụzọ dị mkpa maka ndị mgbasa ozi:
Y’oburu n’inweghi ighari itinye ego na ahia ahia gi na ahia ahia, 2019 bu ohere ikpeazu iji mee nke a.
Ndị na-anaghị azụta okporo ụzọ na programmụ ga-anọgide na-efu ego ka ha na-akwụ ụgwọ gabiga maka mmetụta na ntụgharị.
Ahịa dijitalụ na-agagharị na nghọta zuru oke na njikarịcha (lee anya na DSP gbanwere n'oge afọ gara aga).
Mgbasa ozi vidiyo akwụsịla ịbụ usoro mgbasa ozi adịchaghị - taa ọ bụ usoro iji kpọsaa mgbasa ozi iji bulie oke njikọ aka ma nyefee ndị na-ege ntị n'ozi gị ozi.
Ekwentị na-enweta oke oke nke akara dijitalụ, yabụ ihuenyo mkpanaka ga-abụ ụzọ kachasị arụ ọrụ iji kụrụ ndị na-ege gị ntị.
Tags: 2019Mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziDijitalụ Mgbasa Ozi Mgbasa Oziinfographicmgbasa ozi mgbasa ozimmemmevideo ad dollar